ओलीको कारबाही श्रृंखलाले एमाले संकटमा पर्‍यो : गोकर्ण विष्ट
नेकपा एमालेका नेता गोकर्ण विष्टले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिरहेको कारबाही श्रृंखलाले झन् संकट ल्याउने बताएका छन्। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित ३२ जना सांसदहरुलाई स्पष्टीकरण सोधिएलगत्तै उनले यस्तो बताए...
त्रिदेशीय टि–२० अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको चौथो खेलमा अहिले नेपाल र नेदरल्याण्ड खेल्दैछन् । त्रिवि क्रिकेट मैदानमा जारी खेलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपालले नेदरल्याण्डलाई जितका लागि २०७ रनको लक्ष्य दिएको छ ।&n...
खनाल-नेपालसहितलाई ओलीले सोधे : अर्को पार्टी किन खोलेको? सूर्य चिन्ह र नाम किन दुरुपयोग गरेको ? (पत्रसहित)
सत्तारुढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहित २७ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन्। ओलीले सोमबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयानुसार उनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेका...
कुशल बने लगातार तेस्रो टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय अर्धशतक प्रहार गर्ने तेस्रो एसोसिएट खेलाडी
त्रिवि क्रिकेट मैदानमा जारी त्रिदेशीय टि-२० अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपाली ओपनर कुशल भुर्तेलले लगातार तेस्रो अर्धशतक प्रहार गरेका छन् । उनले मंगलबार नेदरल्यान्डविरुद्ध ४६ बलको सामना गर्दै ८ चौका र १ छक्काको मद्दत...